ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း HBO မက်စ်ကိုယနေ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာဖြင့်စတင်ခဲ့သည်!
by Waylon ဂျော်ဒန် မေလ 27, 2020
ကရေးသား Waylon ဂျော်ဒန် မေလ 27, 2020
HBO ၏အသစ်လွှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်သော HBO Max သည်သင်၏ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ချက်များအားလုံးအတွက်ရုပ်ရှင်များနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးများဖြင့်ယနေ့စတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကထိတ်လန့်စရာပရိသတ်တွေဘာကိုကမ်းလှမ်းတာလဲ
တိုတိုပြောရရင်အများကြီးရှိတယ်။ ထူးဆန်း။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားစရာအထိကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအရာများ၊ သင်တို့၏အရသာသည် Hitchcock ဆီသို့ပိုမိုသွားသည်ဖြစ်စေ၊ ကျောက်တံတား.
ComicBook.com ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကုန်ဆုံးသွားသောခေါင်းစဉ်များစာရင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ခုနစ်ရက်ကြာအခမဲ့စမ်းသပ်မှုပြီးနောက်သင်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၄.၉၉ ဖြင့်တစ်လလျှင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည့်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာများကိုရှာဖွေရန်သူတို့စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းအားစစ်ဆေး။ သင် HBO Max အတွက်မှတ်ချက်များတွင်သင်စာရင်းသွင်းနေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
Elm Street မှာတစ်ဦးကအိပ်မက်ဆိုး
Elm Street2တွင်အိပ်မက်ဆိုး - ဖရက်ဒီ၏လက်စားချေမှု
Elm လမ်း ၃ မှအိပ်မက်ဆိုး - အိပ်မက်သူရဲကောင်းများ
Elm Street4မှအိပ်မက်ဆိုး - အိပ်မက်မာစတာ
Elm လမ်း ၅ မှအိပ်မက်ဆိုး - အိပ်မက်ကလေး
Dr. Strangelove (သို့) ဗွိဟ်ကိုပူပန်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းရပ်တန့်ရန်မည်သို့သင်ယူခဲ့သည်
Freddy's Dead: နောက်ဆုံးအိပ်မက်ဆိုး
Godzilla, အ Monsters ၏ဘုရင်!
Hedorah vs Godzilla
Gremlins 2: သုတ်သုတ်သစ်
အိုင်တီ - အခန်း ၂
မေးရိုး 3-D ကို
Mothra နှင့် Godzilla
The Lady ပျောက်ကွယ်သွားသည်
The Lodger: London Fog ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
တက္ကဆက် Chainsaw သတ်ဖြတ်မှု
Wes Craven ရဲ့အိပ်မက်ဆိုး
HBO မက်စ်ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်လွှWaylon ဂျော်ဒန်
'V' နှင့် 'Out Out' မှ Richard Herd သေဆုံးခဲ့သည်